Game | Game News for Myanmar
​အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာမယ့် အရုပ်တွေနဲ့ အတူ ကစားရမယ့် ဖုန်းဂိမ်း LightSeekers
February 24, 2017 February 24, 2017 frosblaze Andriod, Game, iOS, News
ငယ်ငယ်တုန်းက အရုပ်တွေ ကိုင်ပြီး ဆော့ကစားခဲ့ကြတယ် ။ လေယာဉ်ပျံဆို လေယာဉ်ပျံရုပ်ကို လေထဲ ပျံဝဲနေသလို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း လေယာဉ်ပျံအသံမျိုး ဝီး…. ဝီး နဲ့ကိုင်ဆော့ခဲ့ကြတယ် ။ အခုတော့ ကိုယ့်အရုပ်တွေ တကယ် အသက်ဝင်သလိုမျိုး ကိုင်ဆော့ရမယ့် ဂိမ်းပေါ်လာပါပြီ ။ ဂိမ်းနာမည်က LightSeeker ပါတဲ့ ။
Pokemon Go မျိုး ဖုန်းကင်မရာ အသုံးပြုပြီး အပြင်က ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံမှာ ဂိမ်းတွင်း အကောင်လေးတွေ ပေါ်လာတာ လိုက်ဖမ်းရသလိုမျိုးပါပဲ ။ ဖုန်းကင်မရာကို အသုံးပြုကာ အပြင်ကနဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ augmented reality ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ [trailer ထဲ ကြည့်ရတာတော့ augmented reality က 20% လောက်ပဲ ပါတာ တွေ့ရတယ်] အဆိုပါ LightSeeker ဂိမ်းက Android နဲ့ iOS အတွက်သာ ထွက်လာတော့မှာပါ ။ ဇာတ်လမ်းသွား အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Free to Play (app in purchase) Online ဂိမ်းအနေနဲ့ ထွက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
LightSeeker ဂိမ်းကို သူ့ရဲ့ Card တွေနဲ့ အရုပ် (figure) တွေနဲ့ ပေါင်းဆော့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက် ရဲ့ ကင်မရာရှေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ Card လေးချလိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းထဲမှာ ဒီ card ထဲက အကောင်လေး ခုန်ထွက်လာပြီး သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ ဂိမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ။ နားလည်လွယ်တဲ့ skill တွေ ability တွေ level တွေနဲ့ map ကို (explore) စူးစမ်းရှာဖွေကာ ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ရင်း ဇာတ်လမ်းသွား ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ skill တွေ ability တွေ ဘယ်က ရမလဲ ဆိုတော့ card တွေကနေရမယ် အရုပ်တွေကနေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အရုပ်ကိုရော? ဘယ်လိုသုံးပြီး ကစားရမှာလဲ? အရုပ်နဲ့ ဂိမ်းနဲ့ကို Wifi သုံး Fusion Core ကနေတဆင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက် စခရင်ကို ကြည့်ကာ အရုပ်ကို ကိုင်ပြီး ကစားရမှာပါ ။ အရုပ်တွေမှာ CPU, RAM, Memory (16MB) စသဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသေးစားလေး ပါပါတယ် ။ လဲတပ်နိုင်တဲ့ battery လည်း ပါပါတယ် ။ ဂိမ်းတွင်း ကိုယ့်အကောင် အထိနာတာနဲ့ အပြင်က အရုပ်လေးလဲ တုန်ခါပြီး အသံတွေနဲ့ အော်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရုပ်မှာ လက်နက်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်တောင် ရှိပါသတဲ့ ။ အပြင်က အရုပ်မှာ လက်နက်တစ်ခု တပ်ဆင်လိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းထဲမှာ ကိုယ့်အကောင် အဆင့်မြင့်သွားပြီး ခုနက တပ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကို ဂိမ်းထဲမှာ အသုံးပြု လို့ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂိမ်းကတော့ free to play ဖြစ်ပေမယ့် ဂိမ်းတွင်း ဆော့ရမယ့် (character) အကောင်တွေကိုတော့ သပ်သပ် ဝယ်ရမှာပါ ။ [ပိုက်ဆံ ကုန်ပေါက်ပဲ] အဲ့ဒီ ဆော့ရမယ့် character တွေက card တွေ figure (အရုပ်) တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အရုပ်တွေကို လက်နက်တွေတပ်ပြီး ဖုန်း ၊ တက်ဘလက် ဂိမ်းနဲ့ တွဲလျက် ကိုင်ဆော့ရတာကိုက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ် ။ ၉၀ ဝန်းကျင် မွေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားသလားပဲ ။
ဂိမ်းနဲ့ တွဲဆော့မယ့် အရုပ်တွေကို ဝယ်ရမှာပါ ။ ဒီလို ဝယ်တဲ့နေရာမှာ သင်က ရွေးဝယ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ သင့်ဂိမ်းက ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ LightSeeker အရုပ်တွေရှိတဲ့ နေရာမှာ သင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဖွင့်ပြီး ဘယ်အရုပ်က သင့်ဂိမ်းနဲ့ ကိုက်မလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ရမှာပါ ။ LED မီးနဲ့ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် အချက်ပြပြီး အသံတွေ ထွက်နေတယ်ဆိုရင် သေချာပြီ အဲ့ဒီအရုပ်က သင်ဝယ်သင့်တဲ့ အရုပ်ပါပဲ ။
ဂိမ်းကတော့ Starter pack အနေနဲ့ အထဲမှာ character တစ်ကောင် ၊ Fusion Core တစ်ခုနဲ့ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ $70 ဖြင့် ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ကစ ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို $15 ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ Card တွေပါဝင်တဲ့ Starter Deck တွေကို Single player ကို $20 ၊2player ကို $30 ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ငယျငယျတုနျးက အရုပျတှေ ကိုငျပွီး ဆော့ကစားခဲ့ကွတယျ ။ လယောဉျပြံဆို လယောဉျပြံရုပျကို လထေဲ ပြံဝဲနသေလို လကျနဲ့ကိုငျပွီး ပါးစပျကလညျး လယောဉျပြံအသံမြိုး ဝီး…. ဝီး နဲ့ကိုငျဆော့ခဲ့ကွတယျ ။ အခုတော့ ကိုယျ့အရုပျတှေ တကယျ အသကျဝငျသလိုမြိုး ကိုငျဆော့ရမယျ့ ဂိမျးပျေါလာပါပွီ ။ ဂိမျးနာမညျက LightSeeker ပါတဲ့ ။
Pokemon Go မြိုး ဖုနျးကငျမရာ အသုံးပွုပွီး အပွငျက ပတျဝနျးကငျြနောကျခံမှာ ဂိမျးတှငျး အကောငျလေးတှေ ပျေါလာတာ လိုကျဖမျးရသလိုမြိုးပါပဲ ။ ဖုနျးကငျမရာကို အသုံးပွုကာ အပွငျကနဲ့ ဂိမျးနဲ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့ augmented reality ဂိမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။ [trailer ထဲ ကွညျ့ရတာတော့ augmented reality က 20% လောကျပဲ ပါတာ တှရေ့တယျ] အဆိုပါ LightSeeker ဂိမျးက Android နဲ့ iOS အတှကျသာ ထှကျလာတော့မှာပါ ။ ဇာတျလမျးသှား အမြိုးအစား ဖွဈပွီး Free to Play (app in purchase) Online ဂိမျးအနနေဲ့ ထှကျလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။
LightSeeker ဂိမျးကို သူ့ရဲ့ Card တှနေဲ့ အရုပျ (figure) တှနေဲ့ ပေါငျးဆော့ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဖုနျး သို့မဟုတျ တကျဘလကျ ရဲ့ ကငျမရာရှမှေ့ာ သကျဆိုငျရာ Card လေးခလြိုကျတာနဲ့ ဂိမျးထဲမှာ ဒီ card ထဲက အကောငျလေး ခုနျထှကျလာပွီး သငျ့ကို ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ ။ ဂိမျးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ ။ နားလညျလှယျတဲ့ skill တှေ ability တှေ level တှနေဲ့ map ကို (explore) စူးစမျးရှာဖှကော ရနျသူတှကေို တိုကျခိုကျရငျး ဇာတျလမျးသှား ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ skill တှေ ability တှေ ဘယျက ရမလဲ ဆိုတော့ card တှကေနရေမယျ အရုပျတှကေနေ ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
အရုပျကိုရော? ဘယျလိုသုံးပွီး ကစားရမှာလဲ? အရုပျနဲ့ ဂိမျးနဲ့ကို Wifi သုံး Fusion Core ကနတေဆငျ့ ခြိတျဆကျပွီး ဖုနျး သို့မဟုတျ တကျဘလကျ စခရငျကို ကွညျ့ကာ အရုပျကို ကိုငျပွီး ကစားရမှာပါ ။ အရုပျတှမှော CPU, RAM, Memory (16MB) စသဖွငျ့ ကှနျပြူတာ အသေးစားလေး ပါပါတယျ ။ လဲတပျနိုငျတဲ့ battery လညျး ပါပါတယျ ။ ဂိမျးတှငျး ကိုယျ့အကောငျ အထိနာတာနဲ့ အပွငျက အရုပျလေးလဲ တုနျခါပွီး အသံတှနေဲ့ အျောနမှော ဖွဈပါတယျ ။ အရုပျမှာ လကျနကျပေါငျး ၃၀၀ ကြျောတောငျ ရှိပါသတဲ့ ။ အပွငျက အရုပျမှာ လကျနကျတဈခု တပျဆငျလိုကျတာနဲ့ ဂိမျးထဲမှာ ကိုယျ့အကောငျ အဆငျ့မွငျ့သှားပွီး ခုနက တပျလိုကျတဲ့ လကျနကျကို ဂိမျးထဲမှာ အသုံးပွု လို့ရသှားမှာ ဖွဈပါတယျ ။
ဂိမျးကတော့ free to play ဖွဈပမေယျ့ ဂိမျးတှငျး ဆော့ရမယျ့ (character) အကောငျတှကေိုတော့ သပျသပျ ဝယျရမှာပါ ။ [ပိုကျဆံ ကုနျပေါကျပဲ] အဲ့ဒီ ဆော့ရမယျ့ character တှကေ card တှေ figure (အရုပျ) တှေ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အရုပျတှကေို လကျနကျတှတေပျပွီး ဖုနျး ၊ တကျဘလကျ ဂိမျးနဲ့ တှဲလကျြ ကိုငျဆော့ရတာကိုက စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ ။ ၉၀ ဝနျးကငျြ မှေးတဲ့ သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး ထုတျထားသလားပဲ ။
ဂိမျးနဲ့ တှဲဆော့မယျ့ အရုပျတှကေို ဝယျရမှာပါ ။ ဒီလို ဝယျတဲ့နရောမှာ သငျက ရှေးဝယျရမှာမဟုတျပါဘူး ။ သငျ့ဂိမျးက ရှေးခယျြပေးပါလိမျ့မယျ ။ LightSeeker အရုပျတှရှေိတဲ့ နရောမှာ သငျ့ မိုဘိုငျးဖုနျးဖှငျ့ပွီး ဘယျအရုပျက သငျ့ဂိမျးနဲ့ ကိုကျမလဲဆိုတာ ရှာကွညျ့ရမှာပါ ။ LED မီးနဲ့ မှိတျတုတျ မှိတျတုတျ အခကျြပွပွီး အသံတှေ ထှကျနတေယျဆိုရငျ သခြောပွီ အဲ့ဒီအရုပျက သငျဝယျသငျ့တဲ့ အရုပျပါပဲ ။
ဂိမျးကတော့ Starter pack အနနေဲ့ အထဲမှာ character တဈကောငျ ၊ Fusion Core တဈခုနဲ့ ထှကျလာမှာ ဖွဈပါတယျ ။ $70 ဖွငျ့ ဇူလိုငျ ၁ ရကျနကေ့စ ရောငျးခတြော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို $15 ဖွငျ့လညျးကောငျး ၊ Card တှပေါဝငျတဲ့ Starter Deck တှကေို Single player ကို $20 ၊2player ကို $30 ဖွငျ့ လညျးကောငျး ဝယျယူရရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
February 22, 2017 February 22, 2017 frosblaze Game, PS4, Role Playing, Strategy, Upcoming
​Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ PS4နှင့် PC အတွက် မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မြောက်အမေရိကတွင်လည်းကောင်း ၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဥရောပတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ထွက်ရှိလာတော့မည်
February 22, 2017 frosblaze Game, News, PC, PS4, Role Playing, Strategy, Upcoming
Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ PlayStation4နှင့် PC အတွက် မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မြောက်အမေရိကတွင်လည်းကောင်း ၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဥရောပတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း Koei Tecmo က ကြေညာလိုက်ပါတယ် ။ PlayStatin4အတွက်ဆိုလျှင် physical အနေနှင့်ရော digital အနေနှင့်ပါ ထွက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး PC အတွက်တော့ Steam ကနေတဆင့် ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Pre-orders မှာတော့ “Kunoichi”, “Inahime”, “Kaihime”, နှင့် “Chacha,” character တွေအတွက် Sanada Colors Costumes တွေ အပြင်“Kunoichi” အတွက် Special Costume ပါပါဝင်ပါတယ် ။ အဆိုပါ bonuses တွေကို Amazon, Best Buy, EB Games, နှင့် GameStop ကနေတဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ hack-and-slash action ဂိမ်းအမျိုးအစား ဇာတ်လမ်းသွား ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆာမူရိုင်းခေတ်လို့ အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး Sanada Clan အကြောင်းကို ဗဟိုပြုထားတဲ့ action ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆာမူရိုင်းခေတ်က လူအများလေးစားကြည်ညိုရတဲ့ Masayuki Sanada ကနေ အစပြု ပြီး အင်အားကြီး စစ်ဘုရင်တွေ အကြား အရှုပ်အထွေး အလှည့်အပြောင်းကနေ တဆင့် Sanada Clan ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၊ ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ မွေးဖွားလာပြီး နာမည်ကြီး စစ်သူရဲကောင်းဖြစ်လာတဲ့ Yukimura Sanada အကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ Seige of Osaka အထိ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ PS4နှငျ့ PC အတှကျ မလေ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ မွောကျအမရေိကတှငျလညျးကောငျး ၊ မလေ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ဥရောပတှငျလညျးကောငျး အသီးသီး ထှကျရှိလာတော့မညျ
Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ PlayStation4နှငျ့ PC အတှကျ မလေ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ မွောကျအမရေိကတှငျလညျးကောငျး ၊ မလေ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ဥရောပတှငျလညျးကောငျး အသီးသီး ထှကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈကွောငျး Koei Tecmo က ကွညောလိုကျပါတယျ ။ PlayStatin4အတှကျဆိုလြှငျ physical အနနှေငျ့ရော digital အနနှေငျ့ပါ ထှကျရှိလာမှာ ဖွဈပွီး PC အတှကျတော့ Steam ကနတေဆငျ့ ထှကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။
Pre-orders မှာတော့ “Kunoichi”, “Inahime”, “Kaihime”, နှငျ့ “Chacha,” character တှအေတှကျ Sanada Colors Costumes တှေ အပွငျ“Kunoichi” အတှကျ Special Costume ပါပါဝငျပါတယျ ။ အဆိုပါ bonuses တှကေို Amazon, Best Buy, EB Games, နှငျ့ GameStop ကနတေဆငျ့ ဝယျယူရရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Samurai Warrors: Spirit of Sanada ဟာ hack-and-slash action ဂိမျးအမြိုးအစား ဇာတျလမျးသှား ဂိမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။ ဆာမူရိုငျးခတျေလို့ အမညျတှငျခဲ့တဲ့ ဂပြနျပွညျတှငျးစဈသမိုငျးကို အခွခေံထားတာ ဖွဈပွီး နာမညျကွီး Sanada Clan အကွောငျးကို ဗဟိုပွုထားတဲ့ action ဂိမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။ ဇာတျလမျးကတော့ ဆာမူရိုငျးခတျေက လူအမြားလေးစားကွညျညိုရတဲ့ Masayuki Sanada ကနေ အစပွု ပွီး အငျအားကွီး စဈဘုရငျတှေ အကွား အရှုပျအထှေး အလှညျ့အပွောငျးကနေ တဆငျ့ Sanada Clan ဖွဈပျေါလာပုံ ၊ ပဋိပက်ခတှကွေားမှာ မှေးဖှားလာပွီး နာမညျကွီး စဈသူရဲကောငျးဖွဈလာတဲ့ Yukimura Sanada အကွောငျးနဲ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးတိုကျပှဲ ဖွဈတဲ့ Seige of Osaka အထိ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
February 22, 2017 February 22, 2017 frosblaze First Person Shooter, Game, Horror, News, PC, PS4, Upcoming
​Psycho-Pass: Mandatory Happiness
February 21, 2017 frosblaze Game, News, PC, Upcoming
Psycho-Pass: Mandatory Happiness ဟာ PC အတွက် Steam ကနေတဆင့် လာမယ့် ဧပရယ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ထွက်လာတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း NIS America က 2017 press event မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ် ။ Psycho-Pass ဆိုတဲ့ anime တီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲကို အခြေခံထားတဲ့ Visual novel ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
အနာဂတ် တိုကျိုမြို့ကြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို ဖတ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ပြသနိုင်တဲ့ Physco pass လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာ ။ ဒီကိရိယာကို အသုံးပြု ပြီး ပျော်ရွှင်မှု ရရှိအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ နည်းယူနေကြသလို ဘယ်သူက ဘယ်လိုမျိုး ပြစ်မှု ကျူးလွန်ဖို့ ကြံနေသလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးခြင်းအားဖြင့် လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်နေကြတာ ဖြစ်တယ် ။ လူတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို တိုင်းတာရာမှာ ထိုကိရိယာက coefficient ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ပြလေ့ရှိပါတယ် ။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်မယ့်သူတွေမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်နှုန်းပြကိန်း crime coefficient က မြင့်နေလေ့ရှိပါတယ် ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်မယ့် လူတွေကို Enforcer နဲ့ Inspector ဆိုတဲ့ ၂ ယောက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ရှာရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Enforcer ကတော့ သူကိုယ်တိုင် crime coefficient မြင့်နေပါတယ် ။ သူ့ကို ဘာကြောင့် သုံးရလဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ကကို ပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်တဲ့အတွက် အခြား ပြစ်မှုကျူးလွန်မယ့်သူတွေကို ကောင်းစွာ အနံ့ခံရှာဖွေနိုင်စွမ်း ရှိနေတာမို့လို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ Inspector ကတော့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းနိုင်ပြီး Enforcer က ရှာတွေ့သမျှကို သေချာ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကစားသူဟာ Inspector ဖြစ်တဲ့ Nadeshiko Kugatachi နှင့် Enforcer ဖြစ်တဲ့ Takuma Tsurugi နေရာကနေ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်အတိတ်အကြောင်း မမှတ်မိတော့တဲ့ Inspector Nadeshiko Kugatachi နှင့် ချစ်သူပျောက်ရှာနေတဲ့ Enforcer Takuma Tsurugi တို့ ပြစ်မှုကျူးလွန်မယ့်သူတွေကို ရှာရင်း လူသားတို့ရဲ့ ခါးသီးလှတဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရင်း ရှေ့ဆက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ?
ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Psycho-Pass: Mandatory Happiness ဟာ PlayStation4နှင့် PS Vita မှာ ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
Psycho-Pass: Mandatory Happiness ဟာ PC အတှကျ Steam ကနတေဆငျ့ လာမယျ့ ဧပရယျလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ထှကျလာတော့မှာ ဖွဈကွောငျး NIS America က 2017 press event မှာ ကွညောလိုကျပါတယျ ။ Psycho-Pass ဆိုတဲ့ anime တီဗှီဇာတျလမျးတှဲကို အခွခေံထားတဲ့ Visual novel ဂိမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။
အနာဂတျ တိုကြိုမွို့ကွီးမှာ ဖွဈပါတယျ ။ လူတှရေဲ့ စိတျအခွအေနတှေကေို ဖတျပွီး ကိနျးဂဏနျးတှနေဲ့ ပွသနိုငျတဲ့ Physco pass လို့ချေါတဲ့ ကိရိယာ ။ ဒီကိရိယာကို အသုံးပွု ပွီး ပြျောရှငျမှု ရရှိအောငျ ဘယျလို လုပျရမလဲဆိုတာ နညျးယူနကွေသလို ဘယျသူက ဘယျလိုမြိုး ပွဈမှု ကြူးလှနျဖို့ ကွံနသေလဲဆိုတာ ဖျောထုတျ ဖမျးဆီးခွငျးအားဖွငျ့ လူတှရေဲ့ နထေိုငျမှုဘဝ ပိုမိုကောငျးမှနျလာအောငျ လုပျနကွေတာ ဖွဈတယျ ။ လူတှရေဲ့ စိတျအခွအေနကေို တိုငျးတာရာမှာ ထိုကိရိယာက coefficient ဆိုတဲ့ ကိနျးဂဏနျးနဲ့ ပွလရှေိ့ပါတယျ ။ ပွဈမှု ကြူးလှနျမယျ့သူတှမှော ပွဈမှုကြူးလှနျနှုနျးပွကိနျး crime coefficient က မွငျ့နလေရှေိ့ပါတယျ ။ ပွဈမှုကြူးလှနျမယျ့ လူတှကေို Enforcer နဲ့ Inspector ဆိုတဲ့ ၂ ယောကျပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဖှဲ့နဲ့ ရှာရတာ ဖွဈပါတယျ ။ Enforcer ကတော့ သူကိုယျတိုငျ crime coefficient မွငျ့နပေါတယျ ။ သူ့ကို ဘာကွောငျ့ သုံးရလဲဆိုတော့ သူကိုယျတိုငျကကို ပွဈမှုကြူးလှနျနိုငျတဲ့အတှကျ အခွား ပွဈမှုကြူးလှနျမယျ့သူတှကေို ကောငျးစှာ အနံ့ခံရှာဖှနေိုငျစှမျး ရှိနတောမို့လို့ ဖွဈပါတယျ ။ Inspector ကတော့ လကျအောကျငယျသားတှကေို အမိနျ့ပေးစခေိုငျးနိုငျပွီး Enforcer က ရှာတှသေ့မြှကို သခြော ဝဖေနျဆုံးဖွတျရတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကစားသူဟာ Inspector ဖွဈတဲ့ Nadeshiko Kugatachi နှငျ့ Enforcer ဖွဈတဲ့ Takuma Tsurugi နရောကနေ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ကိုယျ့အတိတျအကွောငျး မမှတျမိတော့တဲ့ Inspector Nadeshiko Kugatachi နှငျ့ ခဈြသူပြောကျရှာနတေဲ့ Enforcer Takuma Tsurugi တို့ ပွဈမှုကြူးလှနျမယျ့သူတှကေို ရှာရငျး လူသားတို့ရဲ့ ခါးသီးလှတဲ့ အမှနျတရားနဲ့ ရငျဆိုငျနရေရငျး ရှဆေ့ကျ ဘာတှေ ဆကျဖွဈကွမှာလဲ?
ယခုလကျရှိအခြိနျမှာတော့ Psycho-Pass: Mandatory Happiness ဟာ PlayStation4နှငျ့ PS Vita မှာ ရရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ ။